Ipo pane vashoma vatengesi vari kusungira mune vatatu vemitambo yemahara kana iwe pre-odha iyo Xbox One X, vaparidzi vemitambo paPC vagara vatora imwe nzira. Pakombuta yako, iyo shongwe- kana clamshell-yakaita guruva muteresi iwe unongobuda iwe kune dzimwe nguva inokurumidza email, ndipo pane akanakisa emahara emitambo mitambo inogara.
The monitors akanakisa chinangwa chekuita kuti mitambo ive nyore pameso
Usatitorere zvisirizvo, pane zvakawanda zvekuda nezvezvazvino kubhadharwa zvemitambo zvemitambo senge Middle Pasi: Shadow Hondo, asi kuti utambe zvese zvakakura katatu-Musoro unoburitswa, waifanirwa kukwikwidza pane zvekutengesa. Ndosaka takatamba yega yemahara-yekutamba mutambo uripo nhasi (zvakanaka, pamwe ndiko kuwedzeredza) chete kuti tiwane yakanakisa yemahara mitambo inozivikanwa kune vanhu.
Mhedzisiro yacho irondedzero yemitambo makumi mashanu neshanu yemahara yatinogona kuisa mavoko edu, kwete imwe yadzo inoda dime yekutamba. Ichokwadi, iwe unogona kutenga mashoma loot mabhokisi kana chaiko kutenga mavara matsva mune mashoma eaya mazita, asi nhau dzakanaka haufanire. Panzvimbo iyoyo, iwe unogona kutamba yakanakisa yemahara mitambo kune iyo yese yekusingaperi, chero bedzi iwe usingafi.
Gabe Carey akabatsirawo kuchinyorwa chino
Tsvaga ese ese madhiri pamitambo uye masystem izvi Black Friday
Yekutanga yemahara-yekutamba yekupinda mune yakasarudzika Turn-based strategy nhevedzano ine chaiyo-nguva zviwanikwa manejimendi manejimendi, Yakazara Hondo: Arena ndeyemahara-kutamba, semhedzisiro yemubatanidzwa pakati peSega neiyo Creative Assembly. Zvatakange zvaziviswa pakutanga muna 2013, zita revatambi-vazhinji chete rave nenguva refu richiuya, asi isu tinofara zvakadaro.
Zvakakwana kuzunza iyo Yakazara Hondo fomula, iyi vhezheni ndeyevazhinji vari pamhepo pahondo nhandare nhandare (MOBA) mutambo, wakafanana naDota 2 uye Chikwata cheLegends. Nekudaro, iye anovandudza anojekesa kuti Arena yakasiyana nemamwe mazita mumhando yayo, mukuti iri MMO kudzoreredza riripo ruzivo rwevazhinji vatambi ruzivo rwakatenderera 10v10 timu-yakavakirwa hondo.
Zuva rekuburitswa kweHondo Yese: Arena haisati yaziviswa, asi izvo hazvina kumisa Iyo Creative Assembly kubva pakupa yakabhadharwa 'muvambi mapakeji' kukurudzira kukurudzira kuyedza yakavharwa beta. Kana iwe uchizoda kubatirira kudzamara yasununguka, zvakadaro, haufanire kumirira zvakanyanyisa kureba kuti zviitwe zviri pamutemo ave makore mana.
Zvinotarisirwa: TBA, yakavharwa beta inowanikwa izvozvi
Makore maviri pamberi paDestiny, kumashure mu2012, taive takaita planet side 2. Iyo epic, ese-ekutanga-munhu wekutanga kurwa zvinoyemurika, iwe unozozvipa iwe nekukurumidza pini pese paunorangarira kuti zvachose mahara. Iko kune-mu-mutambo kutenga hongu, asi iwe unogona kuramba uchinyura mune yemitambo hombe nhandare yehondo uye unobatsira neinongo gadziridza giya.
Iko hakuna kungoita sekutora chikamu pakurwiswa kwakawandisa pachigadziko chevavengi uye kubuda pamusoro, kana kugara munyika umo muvengi wevavengi anogona kuoneka pakatarisana nechero yechipiri. Kana iwe uchida chero humbowo hwekuti 'yemahara' hazvireve kuti hauna kufemerwa, Planetside 2 inozvipa.
Tamba Planetside 2 zvemahara
Iyo Dota zvakasikwa inogona kunge yakabva kune Wacraft 3 mod, asi dota 2 iri kwazvo chikamu chayo pachayo, tisingataure imwe yemitambo inozivikanwa kwazvo yemahara-yekutamba.
Iyi yepamusoro-pasi nhandare battler inoshanda zvisingaite, inokwezva mamirioni-madhora emubairo mari yevatambi venhabvu. Izvo hazvisi zvekungoda kuona, zvakadaro.
Nei Dota 2 Akazvarwa patsva ari wekupedzisira mutambo kune wese munhu
Chidzidzo chipfupi ikozvino chinonongedza tambo, neiyo Steam Nharaunda ichipinda mukati kuti ipe mafambiro kune iyo yekutanga MOBA. Usatarisira kugamuchirwa kwoushamwari kana kuve nyore kudzidza curve kubva kune yayo epamusoro Gameplay mechanics, asi uunze shamwari shoma uye Dota 2 ichave iwe wakabatirira pane imwe yemakona makuru muPC nhoroondo.
Tamba Dota 2 zvemahara
3. Dzinza: Kukwira
Pane chinhu chimwe chete chaunogona kuvimba nacho muhupenyu kunze kwerufu nemitero: jetpacks kutonga. Uye Madzinza: Kwira ndiyo yekutanga yepasirose online jetpack shooter. Donha jetpack yako uye utange muhondo mumepu hombe, uine zvombo zvinotora hunyanzvi chaihwo kungo rova ​​rova ​​- usambofa wakafunga kuuraya.
Marudzi: Kukwira kunokurumidza, hasha, uye kupenya, uye hapana chikonzero chekushandisa chero mari muchitoro chemutambo kana iwe uchingoda kuzvibata wega muhondo. Kunyangwe paine zvakawanda zvezvinhu zvekutenga kana iwe uchifarira uchimwaya imwe mari…
Iwe unogona kubhadhara kuvhura mamwe makirasi, zvombo uye zvigadzirwa, asi kana iwe uchizozvichengeta zvisina kujairika iwe unogona kunge uchiri nemitoro yakawanda yekunakidzwa neMadzinza: Kwira.
Tamba Marudzi: Kwira zvemahara
4. Nzira yeKutapwa
Mune chimiro chaDiablo III, Nzira voKutapwa ndeye yemahara mugomba inokambaira iyo yakati siyanei kubva kune mazhinji emahara-ekutamba mitambo kunze uko. Izvo hazvisi zvekungorova chaiko hupenyu hwevanhu kudzamara vakuchemera iwe mune inonakidza shrub pubescent toni kuburikidza neyavo mahedhiyo eSkype.
Izvo zvakanyanya zvekunonoka-kupisa kupfuura mutambi wevazhinji blaster, asi zvipe nguva uye iwe ungangodanana neiyi yemahara-yekutamba root-kuunganidza hit. Kune kwakadzika kwakadzika uko iwe kwaunofumura chete mushure mekutamba kwemaawa (uye maawa), uye hombe hunyanzvi muti wekutora zvishoma nezvishoma pauri. Iko hakuna mutambo-unoparadza zvinhu senge chaicho mari yemisheni dzimba pano, chero.
Pane kudaro, kunyange chakabiwa chakakosha chinogona kubatsira nekuti panogara paine mukana wekusimudza kunyangwe chombo chiri nyore kwazvo nemashiripiti. Kana iwe ukaneta nekugaya kwaDiablo III, zvakanaka kuti utarise.
Tamba Nzira yeKutapwa mahara
Sarudza shasha yako ugoenda kuhondo mune ino inoshamisa yemahara-yekutamba mutambo kubva kuvakagadziri veDota. Chikwata cheLegends ' otomatiki matchmaking, huwandu hwevatambi uye mepu dzakanaka dzakaita kuti ive nyeredzi yevatambi pamusoro pegore rapfuura, uye imwe inokodzera mutambo.
Ndiwo mutambo une hukasha zvekutamba, asi uyo unopa mubayiro mushandirapamwe wakanaka uye nehunyanzvi nzira. Usatarisira kuti uchazvigona husiku humwe, asi hazvizotora nguva refu usati wave kunakidzwa.
SaDota 2, League of Legends inokwezva vatambi vazhinji vekumusoro-soro, uye iwo makwikwi epamusoro anopa madziva emubairo emadhora anodarika chiuru. Nyika isinganzwisisike ye-e-mitambo, eh?
Tamba League of Legends zvemahara
6.Inzwa yematombo: Magamba eWarcraft
Wakambotamba Mashiripiti Kuunganidza, mutambo wekadhi? Hearthstone kuedza kweBlizzard kugadzira online yemahara-yekutamba imwe nzira kwazviri.
Uye mune yakajairwa Blizzard fashoni, yakanaka kwazvo. Iri kubva ichikoka, ichishaya iyo inotyisa yekufunda curve iwe yaunogona kutarisira kubva pamhepo yekufungidzira kadhi mutambo. Hearthstone inotamba nekukasira, inozvirumbidza nzira yekutarisisa, uye mabhenefiti kubva kune yakakosha mirawo yakatarwa, zvese izvi zvinowedzera kune inosvikika kadhi battler iyo inokupa iwe maawa ekunakidzwa.
Maitiro ekutamba Hearthstone
Kunyangwe ichiwanika, ichiri kunetsa futi, kunyanya kana iwe uchirwisana nemupikisi anotamba makadhi avo chaizvo.
Tamba Hearthstone: Magamba eWarcraft mahara
7. Nyeredzi Hondo: Iyo Yekare Republic
Kutora kubva kune yekutanga Star Wars MMORPG Star Wars Galaxies muna 2011, Nyeredzi Hondo: Iyo Yekare Republic yakanga isina kusununguka pakusunungurwa pakutanga. Asi zvave kubva, semitambo yakawanda kwazvo yerudzi urwu, yakagamuchira yemahara-yekutamba modhi. Kana iwe uchida kuwana Sith kicks, iyi ndiyo nzira yakanakisa yekuvatora mahara.
Nekudaro, kunyoreswa kuchiripo, kukupa iwe zvimwe zviri mumutambo mukana. Ese mamisheni enhau anowanikwa pasina sub - vangangokutorera izvo zvishoma.
Izvo zvakakodzera kurodha pasi kungoona iyo Star Wars zvakasikwa kubva kwakasiyana maonero, seiyo hyper-nyanzvi Imperial Agent uye Bounty Hunter. Kana iwe uchida kuenda neyakagomarara sarudzo uye ingoita yakajairika Jedi Knight, zvakadaro, izvo zvakanaka futi.
Tamba Star Wars: Iyo Yekare Republic yemahara
Apo Xbox musoro Phil Spencer akati aizounza akanakisa mafranchise kuPC, anga asiri kuseka achitenderera. Pakati peaya akakosha akateedzana ndeye Forza Motorsport.
Yakadzivirirwa nepeturu-misoro uye yakambundirwa nevatambi, Forza Motorsport ingaite senge arcadey nhungirwa yemukwikwidzi wayo muhombe pa PlayStation, asi inogara ichitaridzika uye ichinzwa yakanakisa zvakadaro.
Apex kunyanya inounza yakakwana Forza Motorsport mutambo kune PC vatambi kekutanga. Kunyangwe iri yemahara-kutamba, pane zvimwe zvemukati zvinogona kutorwa pasi nemutengo wakaderera. Kunyangwe isiri iyo yakazara-yakazara ruzivo iwe yaunogona kutarisira paXbox One, nerutsigiro rwe4K skrini uye mavhiri ekumhanya, Forza Motorsport 6 Apex ndiyo yemahara-yekutamba twist isu tanga tichishuva kubva kuMicrosoft-yakamira-refu inomhanya nhabvu.
Tamba Forza Motorsport 6 Apex zvemahara
9. Muurayi Instinct
Rare's classic kurwa akateedzana Killer Nahwo rinogona kunge risiri iro zita remumba raimbove, asi kugona kutamba mutambi mumwe mahara kuri kukwezva zvakadaro.
Zvakare, mavara anogona kutengwa mapa sezvinhu zvinogona kurodha pasi, zvinoreva kuti haufanire kuburitsa mari yemari zvisina basa kune vatambi vausingazombotamba. Uye, kune vateveri veXbox kunze uko, mutambo uyu wakangofanana neMicrosoft weSuper Smash Bros uye PlayStation All-Nyeredzi: Hondo Royale sezvo uchikwanisa kutora akawanda Xbox mascots. Izvi zvinosanganisira Arbiter (Halo), Rash (Battletoads) uye General RAAM (Gears of War) kuwedzera kune karagi iri kukura ye Killer Instinct-yakatarwa mavara.
Ipo Killer Instinct isiri inozivikanwa neiyo Kurwisa Mutambo Nharaunda, pane humwe hunyanzvi hwekugona kudzora aya echinyakare Xbox-akatorwa mavara, uye paPC ipapo.
Tamba Killer Instinct mahara
10. Nyika yeMatangi
World pamusoro Motokari dzehondo ndeimwe mhando yeMMO - iyo clue iri mumusoro. Chikwata-chakavakirwa, chakanyanya kuwanda chiitiko chevazhinji nehukuru hwakawanda hwemakina ehondo kutyaira muhondo yakamirira, nevatambi vatsva vanokwanisa kujoina chiito ipapo.
Iyo yekuvandudza system inowedzera pfungwa yekuita munhu, nepo kutenderedzwa neuto rose kunogara kukuyeuchidza kuti vega havaiti zvakanaka panhandare yehondo. Pinda mukati, zvakadaro, uye iwe ungazowana iwe uchipedzisira washandisa chidimbu chemubhadharo wako pane makuru makuru machunks esimbi chaiyo.
Kunyange mamwe matangi eprimiyamu achidhura madhora mashoma, mamwe anodhura. Iwe unogona kuona uko mugadziri Wargaming ari kuzowana imwe mari kubva kuWorld of Matangi vanofarira.
Tamba Nyika Yematangi mahara
11. Kutinhira kweHondo
Funga Nyika yeMatangi ingangoitawo arcade-senge ako ekuda? Iwe unofanirwa kuyedza yemahara mutambo War Thunder. Kunyangwe hazvo isingazivikanwe zvakanyanya, ndiyo imwe nzira yakanaka kune iyo tank battler. Uye kune chimwe chinotapira, chinokanda ndege mumusanganiswa zvakare. Sezvaunogona kutarisira, ivo vanonyanya kunakidza.
NePC inokurumidza zvakakwana, Hondo yeHondo inopa mhando yekuona iwe yausingahwone kazhinji mumitambo yemahara-yekutamba. Iwe unozofanirwa kubhadhara imwe mari kuti ubate dzimwe dzinonakidza ndege nematangi kutanga, asi kuwana Hondo yehondo-senge kutamba kwemahara kurira senge chibvumirano chakanaka kwatiri.
Kune arcade uye nhoroondo dzehondo dziri kupihwa - yekutanga yakanakira kune yakasarudzika kuputika nepo nhoroondo dzehondo dziri zhinji kune vatambi nemaawa mashoma pakadhi ravo rekubhururuka.
Tamba Hondo Yekutinhira mahara
12. Nguva dzose
Kunyangwe ramangwana rayo raive risina chokwadi kwenguva pfupi mushure mekutengeswa kweiyo online online yekuparadzanisa chikamu muna Kukadzi 2015, Everquest yadzoka zvirinani kupfuura nakare nekuwedzera mapakeji ekuwedzera uye kuenderera kutsigirwa neDaybreak Game Kambani.
Yekutanga yerudzi rwayo mukutengesa kubudirira neinjini yemitambo ye3D, Everquest yakaburitswa muna 1999 seMMORPG (yakawanda mitambo yevatambi pamhepo-yekutamba mutambo) uye kubvira ipapo yakanyorwa semumwe wemitambo yakakosha munhoroondo yepakati.
Inoratidzira inogara yakaburitswa yekuwedzera mapakeji (akakura kwazvo muchiyero, zvirinani kutanga) nenzvimbo nyowani nyowani, madzinza uye makirasi, Everquest inounza patafura zvese nezve zvese zvaungatarisira kubva kuMMO - uyezve zviri nani pakubata co-op pane dzimwe nzira dzaro.
Tamba Nguva Dzese mahara
Kunyange isiri World of Warcraft maererano nekuti shamwari dzako dzichiri kuiridza, mutambo wemahara Rift yaive nenguva yayo - uye ichiri kuve nayo zvichienderana nekuti ndiani waunobvunza. Yakawedzera hunyanzvi mune imwe mhando yaive ichisangana nezvishoma, ichikuregedza iwe uchinje kirasi yako pese paunonzwa kuda.
Mutambo wese wakanangana nekuparadzanisa hofori mabhosi ehondo uye zviitiko zvinogara munzvimbo dzese. Chido, chinonakidza uye chihombe chine gumi nemaviri epakati-epakati matunhu anochengeta zvinhu zvitsva uye zvakasarudzika kubva kune mimwe mitambo iri mumhando iyi.
Uyezve, unogona kuchovha pane landshark.
Tamba Rift zvemahara
Runescape ndiyo imwe yemahara-ekutamba maMMOs kunze uko, uye zvino ichave iri nguva yakanaka yekutarisa. Muna 2013 yakapinda kechitatu reboot - iyi iri chaizvo 'Runescape 3', kunyangwe uchingosvetukira mukati ungatadza kukoshesa kwave kutenderera mune imwe fomu kana imwe kweanopfuura makore gumi.
Haisi iyo inopenya kupfuura MMO mupasi kunyangwe paine revamp, asi kurembera kune vazhinji vatambi kunoratidza kuri kuita chimwe chinhu nemazvo. Iko shanduko hombe yakaunzwa muRunescape 3 iyo yakaita kuti iratidzike yakawanda zvemazuva ano yaive kugona kuona zvimwe zvakanyanya - muRunescape 2 iyo yakatarisa yakakurumidza kuita fog. Kwete kudaro izvozvi.
Unogona kudhawunirodha mutambo uyu mahara kana kuimhanyisa mubrowser yako uchishandisa Java, uchiita kuti uve nyore kupfuura vamwe vazhinji vanoita zvepamhepo zveiyi epic sikero.
Tamba Runescape mahara
Kana iwo maratidziro asina kujeka achiwanzobatanidzwa neMMORPGs kudzima kwako, iwe uchafadzwa kuzviona izvo Maplestory inotora tsika yechinyakare dhizaini yema genre uye yoichinjisa pamusoro wayo. Ichitsanangurwa nemugadziri wayo seyekutanga 2D padivi-kutsikisa MMO, Nexon's Maplestory inotora zera-rekare Dungeon & Dragons-rakafuridzirwa genre uye rinoiita kawaii.
Iko kugadzirisa uye kureruka toni yeMaplestory inoita kuti inzwe zvakanyanya seKukohwa Mwedzi MMO pane chimwe chinhu senge Rift kana World of Warcraft. Zvakare zvakanyanya kutarisisa mukuvandudza zvizorwa kupfuura mamwe maMMOs mazhinji, zvichipa vatambi kudzora kwakatarisana nechitarisiko nehunhu hwavo.
Kune mamwe kunyange mu-mutambo michato uye dinosaurs anoridza gitare. Kutendeseka chinhu chega chatiri kushaya pano ruzha rwakanyorwa neOasis.
Kana iwe uri wechitatu-munhu mushandirapamwe mapfura, Warfarme ndeimwe yemitambo yakanakisa yemahara kunze uko. Mushure mekujoinha rimwe remapoka matatu: Tenno, Grineer kana Corpos, musoja wako akashongedzerwa kunze mune yekunamatira yeCrysis uye akashongedzerwa nepfuti kana melee zvombo.
Kutarisa zvirinani pane yako yepakati yemahara-yekutamba shooter, kunakidzwa kwakawanda kunogona kuitwa muWarframe mutambi-vs-muvengi kurwisa - zvakanyanya zvekuti vamwe vatambi vanozviona se, "Iyo Destiny isina kumboitika". Kurumbidzwa kwepamusoro zvirokwazvo.
Tamba Warframe yemahara
Vanamwari vanobva kutenderera pasirese vanoungana kuti varwisane mune yemahara Dota / MOBA yakafuridzira kukakavara kwekutsiva kwaMwari mune izvi kuyedza. Zvisinei Smite's kurudziro iri pachena, inouya kubva kumusimudziri mumwechete akaita FPS kupwanya Marudzi Kukwira - chikara chakasiyana zvachose.
Iyo kamera iri kumashure kwevanyori panguva ino, ichigadzira kubatana kwakanangana kune chiito pane kungotungamira ishe wako kutenderedza negonzo, asi fungidziro yacho ichave iri inozivikanwa kana iwe watamba kurudziro yayo, kana nzira yekunzwa yemaitiro kana usati. Vanamwari vanosanganisira Zeus, Thor, Kali, Artemis uye… Cupid? Zvakanaka, hazvo ane uta hwake…
Tamba Smite mahara
18. Ishe weRings Online
MaMMOs mazhinji ari kuvhurwa kana kuunzwa patsva semahara-kutamba panguva ino, asi Ishe weRings Online ndiwo mamwe emazita ezvinonyanya kukosha kutarisa kwechipiri. Hausi chete mutambo wakanakisa uri wega, ndeimwe yeMMOs dzakakura kunze uko.
Iwe uchafanirwa kubhadhara pakupedzisira, kana chete kungovhura adventure mapake, asi hapana mari yekunyorera uye hapana chekutenga kumusoro-kumberi. Kana iwe wakarasikirwa panguva yekutanga, inguva yekuyedza.
Tamba Ishe weRings Online zvemahara
Pasina kuona anopfuura mashoma screenshots, iwe ungafunge WildStar iri IP nyowani kubva kuRatchet & Clank yekuvandudza Insomniac Mitambo. Inoyevedza uye katuni yakakwana kuti ugare padivi nekatalog imwechete seSpyro, asi ichi hachisi chemahara-kutamba MMO, inogona kunge iri iyo chikonzero icho chisina kuita pamwe nekutarisirwa-kuchenjera.
Kana iwe uchida mitambo yeBlizzard, senge World of Warcraft, Wildstar pasina mubvunzo ichapedza nyota yako sezvo vazhinji vavaki vayo kuCarbine Studios vaibva kune inodiwa Activision Blizzard inotsigira.
Kunyangwe isina kumhara se "shanduko inotevera yeMMORPG yemazuva ano," maererano neiyo IGN ongororo, Wildstar inobata yayo seyakajairwa MMO iyo, isati yaenda yemahara-kutamba, yaive nenzira yakasarudzika yekunyorera inoenderana neicho chaicho mutambi kufambira mberi pamwe mamwe mavara akanyorwa zvine mavara.
Tamba Wildstar mahara
20. Eve Pamhepo
Muna 2003, muIcelandic mugadziri CCP Mitambo yakaburitswa pasi rose Eve Online, inonyudza uye yakadzama "sci-fi chiitiko" icho chingazopedzisira chaunganidza kutarisisa kwevanopfuura mazana mashanu ezviuru vatambi. Eve Online haina kufanana chero mutambo mune chikamu chayo, nekuda kwehukuru hwakawanda hwezviitiko zvekutora chikamu pamwe neayo (nenzira kwayo) kunze kwenyika ino mu-mutambo hupfumi.
Nehurombo, Eve Online mutambi wepasi anga ari pakuderera kubvira 2013. Hazvifanirwe kuuya sekushamisika kuti sezvo nguva ichienderera, vashoma uye vashoma vatambi vanofarira kubhadhara mari yekunyorera yenzvimbo ine mbiri sim ine mawere ekudzidzira curve. Nezve iyo Ascension yekuvandudza, iyo yakaburitswa munaNovember 2016, Eve Online yaenda yemahara-kutamba-zvirinani kusvika padanho.
Iyo nyowani 'alpha clones' system inoratidzwa muEve Online yakafanana ne "risingagumi yemahara kuyedzwa" inoratidzwa muWorld of Warcraft. Iwe unogona kuramba uchiita nevamwe vatambi mune zvemigodhi, hupirisita, kugadzira, kutengesa, kuongorora uye kurwisa, asi humwe hunyanzvi huchave husingabvumirwe. Chero bedzi iwe usine hanya nekukwanisa kusvika kune imwe yengarava dzemitambo zvakanyanya, Eve Online haizobhadhare zana.
Tamba Eve Pamhepo zvemahara
21. Blacklight: Kutsiva
Kusviba: Kutsiva inogona kusasununguka sezvayaive isati yasvika paPS4, asi ichiri nzira inonakidza uye isingadhuri yekutamba FPS. Anenge senge yemahara-yekutamba Titanfall, Blacklight: Kudzorera hakuna imwechete-mutambi modhi yekupa uye inoitika mune ramangwana reCyberpunk marongero akazara neanofarira-modhi modhi senge Deathmatch, Chikwata Deathmatch, Tora Mureza, Kutonga, Mambo we Chikomo uye Kuuraya Zvakasimbiswa.
Iine zvombo zvinogadziriswa uye mechs, hongu, Blacklight: Kudzosera inzira inonakidza, yemahara uye yakachengeteka yekusiya mweya mushure meiyo 9 kusvika 5. Uyezve, nevatambi vanodarika miriyoni imwe vakanyoreswa uye kuverenga, hapana kwandiri kushomeka kwevanotamba navo ( nevanokwikwidza) kujoina navo.
Tamba Blacklight: Kutsiva mahara
Sezvo zvave zviri mubeta kubvira 2012 isina zvishoma kushambadzira kushambadzira, iwe unogona kunge wakanganwa nezvazvo hawken kana kuti vanga vasina kujairana nazvo pakutanga. Kunyanya kukosha, Hawken mutambo nezve mechs. Asi, kwete chero mechs - inokurumidza mechs. Aya ndiwo ako epakati anononoka, emarara matangi eMechWarrior Online Izvi zvinonyanya kufananidzwa nemaExposkeletons e Call of Duty: Yepamberi Hondo.
Ehezve, kuve wakasununguka-kutamba mutambo, iwe unogona kutarisira kubhadhara kukwidziridzwa kune yako yekutanga mech. Nekudaro, iwe unogona achiri kuwana kuravira kweHawken pasina kushandisa dime. Uyezve, isa Oculus Rift uye iwe unogona kuzvionera wega kuti chii VR mitambo ndakakuchengetera. Bvuma icho, iwe wanga uchida kuziva kuti zvinonzwa sei kuti uzorodze mech yako kubva Pacific Rim yabuda.
Tamba Hawken zvemahara
23. Shanduka Stage 2
Kunyangwe ichikurumidza kuwira pachiso chePasi, Evolve yakabviswa kubva paStam ndokusunungurwa zvakare mu beta gore nehafu mushure mekuburitswa kwayo kwekutanga. Ndipo panguva iyo yekutevera kubva Kuruboshwe 4 Vakafa yekuvandudza Turtle Rock yakadamburwa ne100 muzana ine zita nyowani: Shanduka Chikamu 2.
Kunyangwe kuenda mahara-kutamba, chimiro chemutambo chakaramba chakasimba. Ndiwo mutambo wevanhu vs. zombies, kukanganisa, zvikara, kumonyoroka kutsva pane inodiwa mutambo. Chikwata chevatambi vana, vanonzi vavhimi, chakakwikwidzana kukwikwidzana nechikara chimwe chete, muvhimi mumwe nemumwe achiiswa yavo kirasi. Ehezve, nevatambi vana vachitora imwe, pane yakasarudzika yekubata: saka zita remutambo, zvikara zvinotanga padanho rekutanga asi zvinoshanduka nekufamba kwenguva nekuuraya nekudya mhuka dzesango munzvimbo dziri padyo.
Evolve inodhura madhora makumi mana zvisati zvaitika, saka ziva chokwadi kuti iwe unowana mukana kumutambo unotaridzika katatu-A, kunyangwe kana zvakawanda zvemukati zvakavharirwa kuseri kwepaywall. Zvakangodaro iwe unogona kuzvipa iwo wega wega wezita remutengo we $ 40 pane Steam.
Tamba Evolve Stage 2 yemahara
24. Vakuru Mipumburu II: Daggerfall
Yakatamba Skyrim kana Kuzivikanwa? Iwe unofanirwa kumbopa zvekare Vakuru Mipumburu II: Daggerfal kugutsurira. Iyi ma1990 RPG ndeyekutungamira kune ayo anonyanya kufarirwa maRPG, uye iri diki yechinyakare iri yega kurudyi.
Mutambo waro wepasi rose wakawanda zvakapetwa kukura kwechero wevateveri vayo, uye zvirokwazvo ihwo hukuru hwenyika, imwe izere nemhepo. Unogona kunge musingakwanise kuverengera zvakaonekwa zvechinyakare, asi zvakakosha kuti uongorore kana iwe uchida kuona kuti Skyrim yakabva kupi.
Mukuru Mipumburu 6 kuburitswa zuva, nhau uye makuhwa
Inowanikwa yakananga kubva kuBethesda. Muparidzi akatanga kuzvipa zvemahara kupemberera gore regumi nemashanu remutambo. Sokunge isu tanga tisinganzwe kunge takura zvakakwana kare.
Tamba Vakuru Mipumburu II: Daggerfall mahara
25. Marvel Magamba Omega
Mushure mekunge DC Universe Online yaburitswa kumashure mu2011, Marvel akange asina imwe sarudzo kunze kwekukwikwidza neMMORPG yayo. Zvakatora makore maviri, asi mhedzisiro yacho yainakidza asi isina kudzika chiito RPG ine dzakasiyana siyana mitambo yekutamba kweanopfuura makumi maviri nemaviri anotamba (uye, netariro, vanoziva) mavara. Makore matanhatu gare gare, mutambo wakadzorerwa patsva kaviri uye wakazotumirwa kunyaradzo, wakazara-nezvakanyorwa kuti ugadzire mutambo wayo wekare wakatemwa.
Iwe unogona ikozvino, semuenzaniso, kukwirisa chero hunhu mune yenyaya modhi - iyo pane anopfuura zana yekusarudza kubva - uye madonhwe enguva anoreva kuti haufanire kushandisa chaiyo, yakaoma-yakawanikwa mari kuvhura mamwe mavara. Kubva muna 100, kupamba kwakaziviswa futi, kuitira kuti vatore vatambi vechinyakare veMMO, uye neimwe nzira, neimwe nzira maX-Men achiripo kunyangwe paine kusiyana kweMarvel ne2015th Century Fox ... kunyangwe usati waona humbozha hwakafanana.
Tamba Marvel Magamba mahara
Anofarira kuziva kuti Wolfenstein aive ani pamberi Iyo New Order? Wolfenstein 3D yasununguka zvino, uye ichakutora udzokere mugore ra1992 apo vanogadzira mutambo wevakakurumbira John Carmack naJohn Romero vakabatana kuita mutambo we shareware sechinhu chisati chavepo.
Wolfenstein 3D yakatora pfungwa kubva kuMuse Software's Castle Wolfenstein uye Beyond Castle Wolfenstein kugadzira matatu-mativi ekutanga-munhu kupfura iyo yaizotevera kukurudzira kukurudzira kweDambudziko.
Ramba uri mundangariro uchitamba, zvakadaro, kuti nepo Wolfenstein 3D yainakidza kwenguva yayo, pamwe hazvisi izvo zvaungatarisira kubva kune wekutanga-munhu kupfura yematanho ezuva ranhasi. Kunyange zvakadaro, iri nyore uye yemahara nzira yekuwana nhoroondo yemutambo mune yechinyakare-chikoro Hondo Yenyika II mutambo wakapfuma nerondedzero nezve, hazvo, kupfura maNazi kumeso. Usatarisira kupeputswa nenyaya nenyaya imwecheteyo seye Wolfenstein franchise zvakapindirwa zvichangoburwa.
Tamba Wolfenstein 3D mahara
27. Chikwata Nhare 2
Inogona kunge iri vet yekare mukutaura kwemitambo, asi hapana chinopa kunakidzwa kwakawanda kupenga se Team Fort 2. Kusiyana nevazhinji vanopfura vezera rayo, vatambi vachiripo kuti vave nenguva yakanaka pane kukanda kushungurudzwa kune vatsva, uye hapana kushomeka kwematoyi anotonhorera ekunakidzwa nawo. Zvisingaperi zvakapusa uye zvinoshamisa patsva, ichiri imwe yemadzimambo emhando yemapfuti, yemahara-kutamba kana kwete.
Sezvaunogona kufungidzira, kune mamwe madiki-ma transaction anobatanidzwa Unogona kutenga zvimwe zvinhu, zvinowanzo shandiswa kugadzirisa hunhu hwako. Unogona kugadzira yako. Zvinonakidza, uye zvinokutora iwe kunyanya kubatanidzwa muTF2. Avo vatumwa vasatani paValve vanoziva zvavari kuita.
Tambai Team Fortress 2 zvemahara
Kunyangwe zvingave zvakarasika muhutsi hweOverwatch, Vanotyora mutemo uye nezvimwe zvakadaro, Gigantic iri zvekare rimwe gamba kupfura mugungwa rakapunzika gamba shooter fanaticism. Musiyano uripo ndewekuti Gigantic, yakafanana neyakawirwa netsaona Hondo yekuzvarwa, yakanyanya kuwanda MOBA-esque kupfuura Blizzard neBoss Key Studios 'mitambo yakafanana yakanyorwa.
Mutambo uyu unonyanya kutenderedza mapoka maviri evatambi vashanu vari kuyedza kukunda vese uye mumwe anoshamisa leviathan anozivikanwa semuchengeti. Saizvozvo, Gigantic inopa vatambi sarudzo pakati pemhando dzakasiyana dzevatambi mumwe nemumwe nekwaniso yake uye nekukwiridzira. Uyezve, iri paXbox One, zvakare, kana iwe uchida kuenderera nekunakidzwa mumba yekutandarira.
Tamba Gigantic yemahara
29. Mashiripiti Duels
Mashiripiti: Kuungana kunonakidza, handiti? Asi ko kana iwe uchikwanisa kuitamba kubva kunyaradzo yePC yako? Neraki, izvo zvinogoneka nekuda Mashiripiti Duels. Kunyangwe iwe uri wekutanga-nguva mutambi kana wemakore makumi maviri vet, maDuels anokutendera iwe kuti uite zvese zvinoitwa nemutambo wekadhi uye nezvimwe. Nepo anopfuura makadhi matsva mazana matatu achishambadzwa seari kuwanikwa mumutambo wese, pane zvakare yakasarudzika nyaya modhiyo kwaunogona kuona Mashiripiti zvisina kumboitika.
Kana rondedzero mumakadhi ako emakadhi isiri yako kapu yetii, kune zvakare Hondo Yemauto iyo iwe yaunogona kupokana neshamwari dzako, ina-mutambi Mbiri-Musoro Giant kurwa uye kunyangwe iyo yega yega mode mode iwe yaunogona kushandisa kudzidzira uchipesana neAI.
Tamba Mashiripiti maDhiri mahara
30. DC Universe Pamhepo
Kunyangwe iri imwe yemahara-yekutamba MMO pane ino runyorwa, DC Universe Online inotora mavara akaita saSuperman, Batman, Green Lantern uyezve mune yakakura (uye yakagovaniswa) nyika yeruzhinji.
Sarudza kana iwe uchida kuve nhengo yeboka reHero kana Villain wobva wagadzirisa hunhu hwako uye unozotumirwa munyika yeDC Universe Online pamaoko eDaybreak Game Company.
Mushure mekumwe kudzidziswa, mutambo unokupa chinzvimbo sewe nhengo yeJustice League kana Sosaiti zvinoenderana nesarudzo yako yegamba kana akaipa. Kusiyana nemamwe maMMO pane urwu runyorwa uye kunze kwayo, DC Universe Online yakagadzirirwa kuve yakawanda yekudyidzana ichiri kuchengetedza echinyakare maMMORPG zvinhu senge kukwirisa, kupamba, zvinyorwa uye post-mutambo kufambira mberi. Zvakanaka, hazvina kuoma kutamba pasina kushandisa chaiyo-yenyika mari zvakare.
Tamba DC Universe Pamhepo zvemahara
Hazvina kuoma kuona nei Paladins inobata yakawanda yeflack kune yayo yakafanana neOverwatch. Panguva imwecheteyo, mutambi-anotungamira-timu anotakura misiyano yakawanda kubva kune yeBlizzard. Mano anokwidziridzwa zvichibva pane yakaunganidzwa kadhi system, iyo inogona kunyatso shandura matambiro anoita mumwe mutambi.
Zvakare, kusiyana neOverwatch, Paladins yakasununguka-kutamba. Nepo zvinhu zvekuzora zviripo kutenga uchishandisa chaiyo-nyika mari, zvese zvimwe zvinogona kuvhurwa nekungotamba mutambo. Semuenzaniso, iwe unozotanga Paladins nedhiketi imwechete yemakadhi ekutanga, uye kubva ipapo, mamwe madhivhiti ane simba anogona kuvhurwa.
Zvisinei nemabatiro aunosarudza kutamba Paladins, iwe unowana XP paunenge uchitamba. Chero bedzi iwe uchipedzisa mibvunzo yezuva nezuva uye budiriro zvinoratidzwa mumutambo, iwe unozopihwa mubairo neRadiant Chests neGoridhe. Izvi zvinogona kushandiswa kutenga mamwe makadhi, zvipfeko uye matehwe ezvombo kuita kuti vatambi vako vanyanye kusarudzika uye hunyanzvi munhandare yehondo.
Tamba maPaladins mahara
Inotsanangurwa se "Yemahara-kune-Kutamba AAA MMO Shooter" nemugadziri wayo Red 5 Studios, moto kudonha inodhonza huremu hunorema kubva kune vanopfura uye akavhura-nyika maMMOs zvakafanana. Iwo mutambo kurodha pasi wakazara nemashanu akasiyana hunhu makirasi uye ese PvP (mutambi achipesana mutambi) uye PvE (mutambi maringe nenzvimbo) modes.
Firefall ine kirasi yega yega, kusanganisira Assault, Biotech, Dreadnaught, Injiniya neRecon, iwe yaungamboda kuwedzera mukuwedzera kweshanduro dzaungatarisira kubva kuMMO. Nehurombo, nekuti inoshandisa Amazon Web Services, iwo maseva anowanzo kuve asina kusimba, zvichikonzera kusawirirana online chiitiko. Tora zvakapfuura izvo, zvakadaro, uye iwe uri mune yekurapa seFirefall inoenzanisa akanakisa epasirese nyika, vapfura uye MMOs.
Tamba Firefall yemahara
Iwe unogona kuwana ikozvino Spelunky pane ese mapuratifomu - akanaka-epamusoro eiyo indie zita. Asi yakatanga hupenyu hwayo PC-yakasarudzika, uye yayo yekutanga 'isiri HD' Classic vhezheni iwe yaunogona kuwana yemahara nhasi.
Kubata ndekwekuti pese paunotamba, mutambo wese wakasarudzika. Mune mumwe mutambo iwe unogumburwa kuburikidza nechiratidziri mushure mechidzitiro chezvinhu zvinotyisa uye zvinokambaira zvikara; mune inotevera, software ichakotama nekumashure kuti ikupe goridhe uye ikubatsire iwe munzira yako.
Iwe unodzidza maitiro ega ega akasarudzika matiki epasi uye izvo zvishandiso zvinokupa iwe mukana wekurwa. Uyezve unozofa futi. Uye mhere. Uye tangazve. Zvakare.
Tamba Spelunky zvemahara
34. Hazvina kutomboita nguva yechando
SeMMO yemahara, Neverwinter inoisa yakakwira mwero pachayo sezvo ichivakirwa pamutambo wepamusoro-soro-wekutamba mutambo wenguva dzese, Dungeon & Dragons. Kufanana nezvimwe zvese zviri mumaDungeons nemaDragons zvakasikwa, mutambo unoitika muZvinokanganikwa Nzvimbo, kunyanya, sekureva kwezita, muNeverwinter.
Inoratidzira sere hunhu makirasi nemapoka anosvika mashanu evatambi akatsigirwa, Neverwinter yakavakirwa pamitemo yechina-chizvarwa cheDungeons & Dragons. Nekudaro, iyo mitemo inoshandurwa zvishoma, ichirega vatambi vaporese vavanowirirana navo mukuwedzera pakubvumira kushandiswa kwehunyanzvi hwakakosha muhondo mushure mekukwiridzira kwakaringana zviito.
Tamba Neverwinter zvemahara
Kwemakore ikozvino, vagadziri vakaedza uye vakatadza kuchinjisa vatambi vakawanda online kurwa nhandare (MOBA) mitambo yeTV. Zvino, zvakadaro, kana iwe uri mumwe wevakawanda vane komputa yakavharwa pasi peimba yekutandarira yekuvaraidza setup, Paragon inogona kunge iri MOBA yawave uchitsvaga.
Zvakare inowanikwa pane iyo PlayStation 4, Paragon inotora izvo League of Legends uye Dota vatambi vakafadzwa kwemakore uye vanoigadzirisira iwo ekunyaradza uye ezvekuvaraidza rigs nekutenderera kamera kuseri kwechimiro chako. Nekukurudzira kunyepedzera kwechinyakare chechitatu-munhu kukwikwidza kupfura, Paragon inovavarira kuwedzera kukwezva kwete kwete maMOBA chete, asi eSports seyakazara.
Mamepu asymmetrical, timu-yakavakirwa base kuparadzwa uye "gamba" sisitimu ese akasimba. Paragon ndeye MOBA yevatsva, uye zvakanakisa pane zvese, ndeye mahara-kutamba.
36. Dambanemazwi Pirates
Vazhinji maMMO vanokutendera kuti utaure zvaunoda mururimi rwako rwekuzvarwa. Kwete Dambanemazwi Pirates. Iyi MMO yakashongedzwa zvine rukudzo, semusoro wenyaya unoratidza, iri pamusoro pekugadzirisa mapuzzle sepirate. Uye, pane kubvunza mumwe wako wekutanga, "Chii chiri?", Unokurudzirwa kushandisa zvirevo senge "Yarr, matey!" Zvikasadaro, iwe ungazopedzisira wave kufamba nepuranga.
Mumutambo, iwe unogona kujoina vashandi, kuvandudza chinzvimbo chako uye nekuwedzera zvese uchitaura pirate chinangwa uye nekuvandudza hukama hutsva. Chaizvoizvo, iwe uri kutsvaga mari kubva kune ngarava dzevavengi dzinozivikanwa se "zvidimbu zvisere." Nekudaro, zvishoma zvinotarisirwa ndezvekuti kuti uzadzise izvo, iwe uchafanirwa kugadzirisa mapuzzle kuti ufambe uye kuchengetedza ngarava yevashandi vako.
Kuti ave neanopfuura makore gumi nematatu ekuberekwa, Puzzle Pirates ichakabata. Iye zvino unogona kuwana chikamu chevazhinji vePuzzle Puzzle zvemahara pane Steam; single-player modhi haisisipo nekuda kwekumiswa kweiyo CD-ROM vhezheni yemutambo. Zvakangodaro, zvirinani kuti hapana chikonzero chekuibira.
37. Phantom Guruva
Kukura kwaro kutenderera kwaive njodzi, asi pakupedzisira, iyo Phantom Dust remaster yakazoita zvakanaka. IP nyowani muchimiro cheJapan kadhi bhajeti mutambo weiyo Xbox yekutanga, zvaiita sezvakanaka kuva zvechokwadi apo Microsoft yakaratidza kumashure kuE3 2014 kuti remake yakazara yaive mumabasa… uye, sezvazvinoitika, zvaive.
Iyo remake yakaiswa mumakani mu2016, asi Microsoft yanga ichiri kuda kumutsidzira iyo yakasarudzika yechinyakare imwe-off. Sezvazvinoitika, kambani yakazviita neyemaster, kwete iyo remake. Neraki, iyo nyowani vhezheni yePantom Dust ye Windows 10 (uye Xbox One, yevanonyaradza-vanoenda) haibhadhare chinhu chekutamba kunze kwekunge iwe wasarudza kutenga mamwe emumutambo- "makadhi evatambi vakawanda".
Tamba Phantom Guruva zvemahara
38. Nhare Dwarf
Kufuridzira kusikwa kweMinecraft kwaive kusiri diki feat kwe 2D sandbox mutambo Nhare yakasimba. Yakavezwa yekuvaka uye manejimendi simulator, Dwarf Fortress inotora zvakapusa zvinyorwa-zvakavakirwa magiraidhi mune yazvino, 2006 chidimbu che software. Mutambo uyu unowanzo kuverengerwa seyemhando yechinamato nekuda kwehunhu hwayo hwakavhurika uye uchishanda seimwe yeanonyanya kuratidza mienzaniso yemaitiro akagadzirwa roguelike.
Izvi zvinoreva Dwarf Fortress zvese zvinomisikidza nharaunda dzayo uye inoita iyo yemutambo permadeath system iri dambudziko rakanyanya kunetsa kudzivirira. Izvi zvakatungamira kune isingazivikanwe sirogani yemutambo "Kurasikirwa kunonakidza," yaigona kunge isinganzwisisike kana tsananguro chaiyo yezvinoitika mumutambo. Tough kutaura chero nzira.
Chinhu chimwe ndechechokwadi, zvakadaro. Kana iwe uchida kuwana chikamu chakakosha chenhoroondo yemitambo, Dwarf Fortress ndiko kutanga kwakasimba, sezvakaratidzwa paMuseum yeMazuvano Art muNew York City kumashure muna2013. Haikwanise kutaura izvozvo kune yakawanda yemahara- kutamba mitambo.
Tamba Nhare Dwarf mahara
39. Dhijitari: Nyaya yerudo
Kutsanangura Dhijitari: Yerudo Nyaya ingadai iri kupa yakawandisa, saka ngatitii irwo rwendo rukuru rwekushuva nekamwe ramangwana-kutarisa kwakakandirwa mahara. Yakaridzwa zvachose pa1988 -style bulletin board, inotanga paunopindura email kubva kune mumwe musikana anonzwika ari oga anonzi Emilia.
Hukama mune izvi, kwete kunyanya hwakareba, mutambo (awa kana zvichidarika) chibvumirano chekunyora icho chinokurumidza kufadza kunyangwe chisiri chakanyanya kupfuura tambo yekunyora pasi manhamba efoni. Inotamba senge kudanana kwehuvhavha, uine iwe svetuka pakati peBBS masisitimu ekufumura rangano.
Iwe haufe wakasvika pakuona izvo zvawataura, chete mhinduro, iyo inowedzera isinganzwisisike asi inoshanda kudimbura kune hurukuro. Iwo chaiwo kurira mimhanzi uye kurira mhedzisiro inobatsira: inotapira sairini rwiyo rwe modem yekubatanidza ichiri kutumira kutonhora pasi musana.
Tamba Dhijitari: Yerudo Nyaya yemahara
40. Nzvimbo Yekugara
Kana iwe uchinyanya kufarira masisitimu manejimendi manejimendi e Fallout 4 panzvimbo pehuwandu hwakawanda kwazvo hwemutambo wekutamba-zvemukati, Fallout pekugara inzvimbo huru yekutanga. Kusvikira nguva pfupi yadarika, mutambo wekuenzanisa waingogumira kune epuratifomu mapuratifomu Android uye iOS. Nekudaro, nekuunzwa kweVashanyi mushanduro 1.6 yeDonhere Shelter, Bethesda Softworks yakanzwawo kudiwa kwe tora mutambo kuPc nenzira ye Bethesda.net mutengi.
Kudonha Shelter matipi uye madiki
Zvese mune zvese, Kudonha Shelter hakunzwe kwakasiyana zvakanyanya paPC, uye icho pasina mubvunzo chinhu chakanaka. Mouse zvinodzora zvinoshanda mushe pachinzvimbo chebati rekubata, magiraidhi akagadziridzwa kunyangwe epasi-magumo Hardware uye nemawindo windows akagoneswa nekutadza, zviri nyore kuzviwana iwe uine hanya neako vault vagari panguva yako yekuzorora kubasa. Iine mutengo usingarambike unodzora mutengo (yemahara), Fallout Shelter inogona kunge iri Solitaire inotevera muhofisi mako kana kuchikoro.
Tamba Yekudonha Shelter mahara
Nekuda kwekufukidzirwa pawakatanga kuburitswa makore matanhatu apfuura, Brink ikozvino yakasununguka kutamba paSteam - hapana microtransaction yakawedzerwa. Zvinorwadza tichifunga nezvayo inodziya yekutengeserana, asi isu tinofanirwa kupemberera chokwadi chekuti ichi chakasarudzika chinotenderera pane yechinyakare vatambi vevanhu-vekutanga shooter yave kuwanikwa kune vese kuti vafare.
Gara paguta rinoyangarara rinonzi Areka iri kushomeka pane zviwanikwa, Brink inokwikwidza timu yevapoteri, iyo "Kuramba", pamusoro pevachengeti vanoonekwa sevane mhosva kune avo vanogara muhurombo. Mhedzisiro yacho inonakidza, kana isina kukwana, ruzivo rwunobatanidza zvibodzwa zveumwe-mutambi zvinowirirana nehasha dzevadzidzi vakawanda.
Kubva kunogadzira Splash Damage uye muparidzi Bethesda Softworks, ungangodaro wakashandura mhino yako kuBrink panguva yayo yekutanga kuburitswa muna 2011, asi ikozvino zvave zvemahara, uchawana mari yako.
Tamba Brink zvemahara
42. Akazvarwa muhondo
CEO uye mutungamiri weGearbox Software Randy Pitchford vachakuudza zvakasiyana, asi Battleborn akasununguka kutamba. Yakarongwa zviri pamutemo se "yemahara kuyedza" pane Steam, hapana zvakawanda zvekusiyanisa gamba shooter kubva kune mimwe yemahara-yekutamba mitambo pamusika. Iwe unogona kutamba kwenguva yakareba sezvaunoda kushandisa zvitanhatu zvemutambo wemakumi matatu mavara, anotenderera vhiki nevhiki kuzunza zvinhu kumusoro.
Hondo yekuzvarwa yakatanga kuburitswa muna Chivabvu 2016, iwo mwedzi iwoyo seOverwatch. Musiyano mukuru ndewekuti Hondo yekuzvarwa inokwevera simba kubva mumitambo yeMOBA nepo Overwatch iri yakajairika PvP shooter iine eccentric cast yevatambi. Hondo yekuzvarwa zvakare ine imwechete-mutambi mushandirapamwe, unogona kuvhurwa uchishandisa chaiyo-nyika mari.
Tamba Hondo yekuzvarwa mahara
43. Vakuru Mipumburu: Ngano
Iko kune kwakasarudzika neverending maoko emakwikwi evaki varipo izvozvi kuti vabudise rinotevera Hearthstone. Ndokunge, mutambo wakakurumbira unounganidzwa wemakadhi (CCG) uyo "uri nyore kudzidza asi unonetsa kugona." Ndiwo mazwi, mazwi, mushambadzi Bethesda Softworks ari kushandisa kurondedzera Iwo Makuru Mipumburu: Ngano.
CCG inotora kubva kumakambani anodikanwa ekambani RPG franchise, Vakuru Mipumburu: Ngano dzinozvipatsanura kubva kune vanofarira vanokwikwidza chaiwo makadhi emakadhi senge Hearthstone uye Iyo Witcher 3's Gwent nekumisikidza maviri-nzira nzira iyo inochengeta vatambi pazvigunwe zvavo. kana zvasvika pakuronga mazano.
Uye, kana iwe uchingoshuva yakawanda Skyrim, iwe uchafadzwa kuziva kuti iyo Magamba eSkyrim kuwedzera kweVakuru Mipumburu: Ngano dzinorongedza mumakumi mashanu emamwe makadhi, mamwe acho ari anozivikanwa zviso saAela muHuntress, J'Zargo uye Delphine.
Tamba Vakuru Mipumburu: Ngano mahara
44. Mhere Yekutya
Haisi zuva rega rega ratinoona yakazara-kureba kupona inotyisa mushandirapamwe zvachose mahara pasina tambo dzakabatanidzwa. Nekudaro, ndizvo chaizvo izvo Team Psykskallar yakaronga kuita nayo Kuchema kwekutya. Yakazara neyechete-mutambi nyaya modhi inodarika maawa masere, Kuchema kwekutya kwakatanga kugadzirwa seHalf-Hupenyu mod yakajeka yakafuridzirwa neyakajairwa Resident Zvakaipa, kuchinjisa magumo uye zvese.
Sanganisa izvo nerubatsiro rwe co-op kwevatambi vanosvika vana, makumi maviri neshanu sarudzo dzakasarudzika uye mushandirapamwe unovhurika mushure mekurova yekutanga uye "yemahara" inotanga kurira senge yekutenga. Kunyangwe iyo nyaya yacho pachayo isiri iyo yese, Kuchema kweKutya kunogadza muenzaniso wekuti inotyisa mod inofanirwa kubuda sei mumutambo wayo wega mushure memakore mana-ekuvandudza kutenderera. Iyo nostalgic, yemuchadenga uye, zvakanakisa zvese, zvinotyisa zvinotyisa.
Tamba Kuchema kwekutya mahara
45. Yese Hondo Hondo: Humambo
Real-time Strategic (RTS) mitambo haiuye yakakura kwazvo kupfuura iyo irimo muHondo Yese akateedzana, uye vachangopinda, Hondo dzeHumambo, yakasununguka-kutamba. Parizvino iri yakavhurika beta paPC, inowanikwawo kutamba paIOS uye Android, kuti ugone kutora kwawakasiya kana iwe uri kure neako kurwa. Gara panopera zana regumi, Yese Hondo Hondo: Humambo inosanganisa manejimendi manejimendi pamwe neyakavakirwa humambo kuendesa kuruma-saizi RTS mutambo iwe unogona kutora uye kutamba chero kupi, chero nguva.
Tamba Yakazara Hondo Hondo: Humambo mahara
Wepamusoro 46 mitambo yemahara yemahara yaunofanira kutamba muna 2017
Iyi ndiyo mitambo yepamhepo yepamusoro yaunogona kutamba paPS5